Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil Booliska Turkiga Katirsan oo Maxkamada La Horkeenay.
Saraakiil Booliska Turkiga Katirsan oo Maxkamada La Horkeenay.
29-Sarkaal oo ka tirsan booliiska Turkiga ayay maxkamadayn uga billaatay xabsi dhexdii iyaga oo ku eedaysan in ay rabeen in ay dawladda inqilaabaan intii uu socday afgambigii dhicisoobay ee bishii July 2016.
Waa maxkamadayntii u horaysay ee ka dhacda magaalada Istanbul tan iyo markii uu dhicisoobay inqilaabkaasi. Maxkamadaynta oo afar maalmood socon doonta ayaa billaabatay Talaadadii shalay ahayd iyada oo aad loo adkeeyay ammaanka xabsiga Silivri jail oo ku yaalla duleedka magaalada Istanbul.
Qaar ka mid ah 29-ka askari ee booliiska ah waxay mutaysan doonaan xabsi daa’in haddii lagu helo eedaymaha loo haysto ee ah in ay qayb ka ahaayeen afgambigii dhicisoobay. Dhamaantood waxaa lagu eedeeyay in ay taabacsan yihiin Wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Golan iyo in ay diideen in ay awaamiirta qaataan si ay u difaacaan madaxwaynaha. Sideed ka mid ah ayaase loo haystaa eedaymo intaas ka sahlan.
Xukuumada Turkiga ayaa xidhay qiyaastii 40,000 oo ruux waxayna shaqada ka eriday in kabadan tiradaas ka dib markii ay qaybo ka mid ah millatariga iyo booliisku ay isku dayeen in ay xilka ka tuuraan madaxwayne Recep Tayyip Erdogan.
Afgambigaas waxaa lagu eedeeyay Fatxullah Golan oo ah wadaad ku sugan dalka Maraykanka. Wuu diiday eedaymahaas balse madaxwaynaha Turkiga ayaa ka digay in dhaqdhaqaaqa Fatxullah Golan uu wali ka dhaqdhaqaaqo gudaha dalka.
Askarigii shaqada fasaxa ka ahaa ee dilay safiirkii Ruushka Andrei Karlov ayaa isna lala xidhiidhiyay dhaqdhaqaaqa Fatxullah Golan, inkastoo askarigaas uu ku dhawaaqayay magaca magaalada Xalab ee dalka Suuriya ka hor inta aan toogasho lagu dilin.